Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 duanii waliigalatti nama 5,400 guyyaa kibxataa gahee jira | KWIT
Governor Kim Reynolds alaaban Iowa keessa jiru hundi isaatu hanga jimaata galgalaati gad bue akka fannifamu himte. Gochi kunis ajaja President Joe Bidens sababa corona virus jalqaba irraa hanga ammaati United State keessati namni due 500,000 gahuu isaati.
Alaaban ijaarsa state capital, maneen umaata, ground fi facilities state keessa jiru hunda isaa irrati akka gad bu’ee fanisamu kan ta’uudha.
Bakkeen biraas kabajaadhaf akka alaaba gad buusani fannis kabajaa guddaa akka qaban himan.
Nebraska keessati namni corona virus qabamu lakkoofsi gad xiqqaata deemu jira, akkasumas lakkoofsi nama sababa corona virus hospitaala jiran kanjalqaba irraa gad xiqqaate kan deemu jiruudha.
Nebraska akka gabaassanitti torbaan darbe keessati namni haarawa corona virus qabame 1,700 dha, kunis torbaan kan jalqaba irraa kan gad bueedha innis 3,606 ture. Akka state waliigalattii namni sababa corona virus due waliigalatti 2,050 gaheera, kunis namni 67 Dakota County keessati kan dueedha.
Police deparmanty Sioux City akka himanitti wagga darbe waliin wayta walbira qabanii laalan yakki hojachuun harka 26% akka dabalee jiru himan. Qabeenyi nama baduu harka 15% xiqqaate jira. Bara 2020 magaaladhan keessati badii guddaa kan Meesha waraanatti walqabaxee baaye akka jiruufi sababa kana namni 6 akka due turees himani jiran.